एडोब फोटोशपको साथ steps चरणमा नियन पाठ कसरी सिर्जना गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
एडोब फोटोशपको साथ steps चरणमा नियन पाठ कसरी सिर्जना गर्ने
एडोब फोटोशप प्रस्ताव आश्चर्यजनक ब्लेन्डिंग उपकरणहरू। यदि तपाइँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्नु हुन्छ र यदि तपाइँ विस्तृतमा ध्यान दिनुहुन्छ भने, तिनीहरू संग तपाईं अनन्त सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ धेरै यथार्थपरक प्रभावहरू। ग्राफिक डिजाइनमा, फेसन जस्तै, सबै कुरा फिर्ता आउँदछ र यस बर्ष हामीले देख्यौं कि कसरी 80० को दशकमा फेरि सौंदर्य प्रवृत्ति भयो। हडताल गर्ने रंगहरू, कालो छविहरू, विभिन्न बनावटहरू, नियन बत्तीहरू, यी तत्वहरूले पोस्टर र विज्ञापन अभियानको बाढी आएको छ जुन हामीलाई अपराधको दशकमा फिर्ता लिन्छ।
नियन लाइटहरू क्लासिक हुन् अस्सीको दशकको विज्ञापनको, त्यसैले म तिनीहरूलाई यो पोष्टको लागि रिकभर गर्न चाहन्थें। क) हो, म तपाईंलाई देखाउनेछु कि कसरी easy सजिलो चरणहरूमा Adobe Photoshop को साथ नियोन पाठ बनाउने।
1 उपयुक्त पृष्ठभूमि छान्नुहोस्
2 फन्ट र पाठ आकार को चयन
3 पाठ तहको शैली परिमार्जन गर्नुहोस्
4 नियन प्रभाव लागू गर्नुहोस्
5 अधिक यथार्थवाद पाउनुहोस्
5.1 ब्रश उपकरण चयन गर्नुहोस् र कन्फिगर गर्नुहोस्
5.2 नरम प्रकाश प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस्
उपयुक्त पृष्ठभूमि छान्नुहोस्
यद्यपि यो सत्य हो कि तपाइँ यसलाई फरक र colored्गीन पृष्ठभूमिमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाइँ एक कालो पृष्ठभूमि छनौट गर्नुभयो, परिणाम राम्रो र अधिक यथार्थिक हुनेछ। तपाई यसलाई सिधा कालो पृष्ठभूमिमा गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाई कुनै बनावट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा मैले पृष्ठभूमि चयन गरेको छु जुन अँध्यारो इट्टाको भित्ताको अनुकरण गर्दछ र म तेर्सो स्थितिमा A4 साइज फाइलमा काम गर्न जाँदैछु।
फन्ट र पाठ आकार को चयन
तपाइँको नियन पाठ सिर्जना गर्न म मोटो फन्ट छान्ने सल्लाह दिन्छु, भारी र थोरै विस्तारित, अब उप्रान्त किनभने प्रभावहरू लागू गर्दा तपाईंलाई राम्रो लाग्नेछ, तर किनभने बाक्लो टाइपफेसहरू 80 को दशकमा धेरै फेसनशील थिए। आकार, यो तपाइँको डिजाइन को आवश्यकताहरु मा एक धेरै निर्भर गर्दछ र तपाईं छनौट फन्ट। जे होस्, म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु कि यो प्रभाव साना पाठहरूको लागि होईन, बरु यसको लागि ठूला आँखा पार्ने पदहरू। अर्को कुरा तपाईले बिर्सनु हुँदैन अक्षरहरू बिचको फाँटयदि तपाईं फन्ट छान्नुहुन्छ जसमा यो पूर्वनिर्धारित ठाउँ एकदम सानो छ, तपाईंले यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेछ। चिन्ता नलिनुहोस्! अब हामी यसलाई कसरी गर्ने भन्ने हेर्नेछौं।
मेरो अवस्थामा, मैले «प्रभाव» फन्टको लागि रोजेको छु र मैले उसलाई एउटा दिएँ १०० पोइन्ट साइज। पात्रहरूको बिच ठाउँ थोरै भएको कारणले मैले यसलाईaदिएँ १० को मान जब ट्र्याकि।। त्यो मान परिवर्तन गरेर हामी प्रत्येक वर्णको बिचमा ठाउँ परिमार्जन गर्दछौं।
केवल पाठमा यो पign्क्तिबद्धता दिन मैले पign्क्तिबद्धता विकल्प परिमार्जन गरेको छु "पाठ मेनू" मा जुन सामान्यतया पर्दाको शीर्षमा देखा पर्दछ। तपाईले गर्नु पर्छ «केन्द्र पाठ select चयन गर्नुहोस्। पृष्ठको बिचमा राख्नका लागि नियन्त्रण + T थिच्नुहोस् (यदि तपाइँ विन्डोजमा काम गर्नुहुन्छ) वा आदेश + T (यदि तपाईं म्याकमा काम गर्नुहुन्छ) र तपाईं यसलाई स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्नुहुनेछ।
पाठ तहको शैली परिमार्जन गर्नुहोस्
एक पटक तपाईले आफ्नो पाठ बनाउनु भएपछि तपाई के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भरणलाई ०% मा कम गर्नुहोस्। पाठ हराउनेछ, तर डराउनु हुँदैन, तपाईंले केही गल्ती गर्नु भएको छैन, यो मात्र हुनेवाला छ।
अब हामी अगाडि बढ्ने छौं पाठ तहको शैली परिमार्जन गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईले गर्नु पर्छ तह शैली मेनू खोल्नुहोस्: "तह" ट्याबमा होभरिंग तपाईं ड्रप-डाउन मेनू खोल्नुहुनेछ, "लेयर शैली" मा होभर गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्। "फ्यूजन विकल्पहरू"। मेनू खुल्नेछ, तपाईले गर्नु पर्छ स्ट्रोक विकल्प चयन गर्नुहोस् र निम्न तत्वहरू परिमार्जन गर्नुहोस्: आकार र रंग। रंगको लागि एक लक्ष्य छनौट गर्नुहोस्। आकारका लागि म तपाईंलाई सटीक मान दिन सक्दिन किनकि यो तपाईंको टाइपोग्राफी र छनौट गरिएको फन्टको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। मेरो केसमा, मैले फिक्स गरें stroke मा स्ट्रोक आकार, महत्त्वपूर्ण छ धेरै मोटो छैन त्यसोभए प्रभावहरू थप्दा तपाइँ पढ्ने योग्यता गुमाउँनुहुन्न।
जारी गर्नु अघि, हामी पाठ र प्रभावको साथ एक समूह सिर्जना गर्नेछौं (प्रभाव ट्रेस)। केवल समूह सिर्जना गर्न छनौट गर्नुहोस् पाठ तह र आदेश + G हिट गर्नुहोस्। अब देखि हामी त्यो समूहमा प्रभावहरू लागू गर्नेछौं।
नियन प्रभाव लागू गर्नुहोस्
अब धेरै ध्यान दिन तयार हुनुहोस् किनकि सब भन्दा चाखलाग्दो सुरू हुन्छ। Will समूह पाठ + प्रभावहरू Select हामी छनौट गर्दैछौं तह शैली मेनू फेरि खोल्नुहोस् (याद गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई "fx" चिन्ह चयन गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ)। त्यसपछि जाँच गर्नुहोस् "बाहिरी चमक" प्रभाव। फेरी, मानहरू जुन हामीले यो प्रभाव दिन्छौं डिजाइनको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ, विकल्प सक्रिय गर्नुहोस् «पूर्वावलोकन sim एकै साथ सेटिंग्स कस्तो छ हेर्नका लागि। मेरो केसमा, मैले स्ट्राइकि pink गुलाबी रंगको लागि रोजेको छु र मैले एउटा चयन गरेको छु %०% अस्पष्टता। तपाइँले एक प्राविधिक छनौट गर्नुपर्नेछ, मेरो सुझाव छ कि तपाइँ "चिकनी" विकल्प छनौट गर्नुहोस् र "विस्तार" र "आकार" मानहरू समायोजित गर्नुहोस्। म तपाइँलाई तल एक छोड्छु स्क्रिनसट मानको साथ त्यसले मेरो डिजाइनको लागि सेवा पुर्‍यायो।
अधिक यथार्थवाद पाउनुहोस्
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, हामी जुन पहिले नै एउटा निओन पाठ मान्न सक्छौ, तर हामी कसरी परिणाम चाहन्छु यथार्थपरक हुन चाहन्छु म तिमीलाई दिन लागिरहेको छु। डिजाइन सुधार गर्न केहि थप सुझावहरू। वास्तविक नियोन पाठहरु प्रकाश दिन्छ कि हामी फोटोशपको साथ त्यो प्रकाश अनुकरण गर्न सक्छौं? हो, पक्कै पनि हामी यो गर्न सक्दछौं र तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ।
ब्रश उपकरण चयन गर्नुहोस् र कन्फिगर गर्नुहोस्
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो नयाँ लेयर सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसो भए ब्रश उपकरण चयन गर्नुहोस् र छनौट गर्नुहोस् "प्रसारण गोलाकार" टिप। तपाईंले आफ्नो ब्रशको विशेषताहरू अनुकूलित गर्नुपर्नेछ। हामी आकार परिमार्जन द्वारा शुरू गर्नेछौं, आदर्श त्यो हो टिप को मोटाई तपाईंको पाठ बाकस कब्जा भन्दा थोरै ठूलो छ (मैले यसलाई २2390। ० px को मूल्य दिन आवश्यक छ)। तपाईले पनि गर्नु पर्छ आकारलाई अलि परिवर्तन गर्नुहोस् ब्रशको, यो गर्न ब्रश मेनूको ग्राफिकमा उपस्थित सेतो डटहरू सार्न सर्कललाई अलि सपाट गर्नुहोला ताकि यो अझ राम्रोसँग तपाइँको पाठको आकारमा अनुकूल हुन्छ। हामी अस्पष्टता कम गर्नेछौं, यो प्रत्येकको व्यक्तिगत स्वादमा थोरै निर्भर गर्दछ, मलाई मन पर्छ कि प्रभावहरू नरम छन्, त्यसैले मैले घटाए २१% अस्पष्टता। अन्तमा, ब्रशको रंग चयन गर्नुहोस्, भर्न ठ्याक्कै उही रंगको हुनुपर्दछ जुन तपाईंले बाहिरी चमक दिनुभयो (यस अवस्थामा गुलाबी)। र color उही बनाउनका लागि तपाईसँग दुईवटा विकल्पहरू छन्: तपाईले दिइएको र color कोड प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ वा त्यो र your्ग तपाईको पुस्तकालयमा नमूनाको रूपमा थप्न सक्नुहुन्छ।
नरम प्रकाश प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस्
जब तपाईं आफ्नो ब्रश सेट छ, मात्र तपाईंले आफ्नो पाठको बिचमा क्लिक गर्नुपर्नेछ बिन्दु रंग्न त्यो पोइन्टले पहिले नै प्रकाशको नक्कल गर्दछ, तर राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न म सुझाव दिन्छु कि तपाईले "पाठ + प्रभाव" को समूह मुनि तह राख्नुहोला।। म आशा गर्दछु कि एडोब फोटोशपको साथ steps चरणमा नियन टेक्स्ट कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारे ट्यूटोरियलले तपाईंलाई राम्रो सेवा पुर्यायो। तपाईं यो डिजाईनलाई आफ्नै बनाउन तयार हुनुहुन्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » एडोब फोटोशपको साथ steps चरणमा नियन पाठ कसरी सिर्जना गर्ने
फोटोशपको साथ PNG छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
एडोब लाइटरूम एआरएममा एप्पल एम १ र विन्डोज १० को लागि नेटिभ अनुप्रयोग बन्छ